Uyenza njani imisebenzi emininzi ngaphandle kokuphazamiseka njengezinto eziluncedo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJose Angel | | ngokubanzi, Amaqhinga
Eli candelo lihlala libalulekile xa usenza imisebenzi kunye nekhompyuter. Ingakumbi ukuba uyenza ekhaya. Xa kuziwa ekucoceni, siyazi ukuba zeziphi iindawo ekufuneka sizicoce kwaye asikhathali malunga nomyalelo. Njengakumatshini, siyazi ukuba kufuneka ulungise enye imoto emva koko ulungise enye. Lo myalelo ulula uba nzima xa kukho izinto ezininzi eziphazamisayo kwikhompyuter kunye nokukhululeka kokutsiba ukusuka komnye umsebenzi ukuya komnye, ngaphandle kokugqiba nayiphi na. Ukwenza imisebenzi emininzi ngaphandle kokuphazanyiswa kukuvula iphephandaba kunzima, kodwa iyimfuneko.
Uphando lubonisa ukuba siphulukana neepesenti ezingama-40 kwimveliso yethu ukuba senza izinto ezininzi ngexesha elinye, kuba senza iimpazamo ezininzi kwaye sithatha ixesha elide ukwenza izinto. Ngethamsanqa, hNazi ezinye iindlela ezilula esinokuzisebenzisa ukulawula ixesha lethu kunye nokukhathalela ngokufanelekileyo.
1 Nciphisa iithebhu zekhompyuter
2 Bhala amanqaku
3 Guqula indawo zokusebenza
4 Misela ishedyuli ethile
Nciphisa iithebhu zekhompyuter
Shiya iividiyo zesicwangciso Fortnite kunye nendlela yokufezekisa impumelelo ngamaqhinga athile. Ulibale iithebhu zamaphephandaba zokudlulisa okanye iindaba ezintsha. Cima konke oku kwisikhangeli sakho, ukugxila kuphela kwiithebhu ekufuneka uzigqibile umsebenzi wakho.
Olunye uluvo kukongeza yonke imisebenzi yethu kwizicelo ezinje ngeTodoist okanye iWunderlust. Sigcina amanqaku kwiPokotho okanye kwiibrawuza ozithandayo (ukuze ufunde kamva). Ke, siya kugcina kuphela iithebhu ezinomdla kuthi ukugqiba umsebenzi. Ukuba, kwimeko yakho, awukwazi ukuzivala ngokwakho iithebhu, zikho ezinye izixhobo. Ulwandiso esincomela ukuba lube 'Momentum'. Ilula, ngokumangalisayo ilula kwaye iyasebenza. Yitsho into ofuna ukugxila kuyo kunye nokuphelisa zonke ezinye iziphazamiso. Sisiqalo.
Sukukujongela phantsi ukubaluleka kokuba namanqaku abhaliweyo ngemikhwa yakho kunye nemisebenzi engekenziwa ekufuneka uyenzile. Nangona nje kukho izixhobo ezifana ne-Evernote eyaziwayo o OneNote Kule meko ndingacebisa ukusebenzisa into ebonakalayo. Njengamanqaku ancangathi okanye i-ajenda. Ke, ngale ndlela siyalibala kancinci malunga nokuphazamiseka okunokuthi 'izinto' ezingaphezulu zisibangele kwikhompyuter. Ukujonga ngokukhawuleza kwishedyuli yethu kwaye sifumana masiyenze.
Ngamanye amaxesha sicinga ukuba sinenkumbulo entle kangangokuba kungafuneki ukuba siyibhale phantsi, kodwa ayisiyiyo malunga nenkumbulo elungileyo okanye embi. Ngamanye amaxesha, utshintsho lomxholo phakathi komsebenzi kunye nomnye kunokukuphazamisa kwaye kukuthintele ekukhumbuleni into ekufuneka uyenzile. Ukuba namanqaku kuthatha uxinzelelo lokuzama ukukhumbula kwaye lwenze lula ukutshintsha. yoxinaniso ukusuka komnye umsebenzi ukuya kolandelayo.
Guqula indawo zokusebenza
Xa usebenza ekhaya, kulula kakhulu ukuhlala kwisofa kwaye usixelele "apha ndiza kwenza umsebenzi olandelayo", elo binzana ngokwalo lixoka. Nje ukuba sizinze, siphulukana nomkhondo wexesha kwaye siphazamiseke. Kungenxa yoko le nto ukusebenza ekhaya kufuneka kusenze sibe ngqongqo. Ukukhetha indawo zokusebenzela ezithile zomsebenzi ngamnye kunokukunceda ufezekise iodolo. Ukuba unomsebenzi owubizayo 'Lubhelu'Lo msebenzi siya kuwenza "kwigumbi loku-1"; Ukuba umsebenzi wakho ngu 'Luhlaza' Siza kuyenza "kwigumbi lesi-3".
Kwimeko yokusebenza eofisini ungayenza uthule ngeendawo. Nokuba ngumsebenzi wasekhaya 'otyheli' eofisini okanye owasekhaya 'oluhlaza' kwilayibrari. Kuya kufuneka ukhethe ngokweemeko ezikufanelayo kwimisebenzi eyahlukeneyo.
Misela ishedyuli ethile
Endaweni yokuzama ukwenza izinto ezininzi ngalo lonke ixesha, beka ecaleni iibhloko zexesha lokugxila kwimisebenzi ethile: iyure enye ukubhala ibhlog, ezine ukugqiba loo mifanekiso, njl. Obu buchule bunokubizwa ngokuba 'Inkqubo yePomodoro'Yahlula ixesha libe ngamacandelo emizuzu engama-25 umzekelo, ngekhefu lemizuzu emihlanu phakathi. Nje ukuba umjikelo ugqityiwe, unokuqokelela ixesha elide lokuphumla (imizuzu engama-20).
Ngokubanzi, imizuzu engama-25 lixesha elaneleyo lokuqhubela phambili nomsebenzi, kwaye ikhefu lemizuzu emihlanu lifutshane ngokwaneleyo ukuba ungaphazamisi umbono wam wokusebenza. Unokukhetha iibhloko ezinde zexesha lomsebenzi kunye nekhefu elincinci. Zama ngamathuba kwaye ufumane isingqisho esikusebenzelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyenza njani imisebenzi emininzi ngaphandle kokuphazamiseka njengezinto ezilungileyo
U-Emilio Castelló Ambou sitsho
Uyenza njani imisebenzi emininzi njengezinto ezilungileyo ngaphandle kokuphazamiseka
Phendula uEmilio Castelló Ambou
Gcina ukuya kuthi ga kwi-1333 yeedola kwesi sibonelelo sikhethekileyo seetemplate ezingama-250 kunye neekhompyuter zamakhadi oshishino, iiflaya nokunye